Grenada na-akpachapụkwu anya iji meghee ókèala ya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Grenada na -agbasa » Grenada na-akpachapụkwu anya iji meghee ókèala ya
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Prime Minista Grenada Dr. Keith Mitchell
Prime Minista Grenada Dr. Keith Mitchell ekwuputala ụzọ akpachapụ anya ka esi wee mepee ókèala mba ahụ. Na adreesị nke mba ahụ na Sọnde June 28, Mịnịsta Ala kwuru na akụkọ kwa ụbọchị nke ọnụọgụ ọrịa na-arịwanye elu, ọkachasị na US, nke bụ isi iyi isi ahịa maka Grenada, ndị isi ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na mmechi nke usoro iwu tupu mba amalite ịnakwere ụgbọ elu azụmahịa.
Mịnịsta Ala gara n’ihu na-ekwu na ndị ọrụ Ahụike anwalela ma nyochaa usoro iwu etinye maka nchedo ụmụ amaala na ndị ọbịa ma ọtụtụ ebe achọpụtala maka mmelite. Ya mere, maka ọdịnihu, Grenada ga-aga n'ihu ịnabata ụgbọ elu ndị akwụ ụgwọ n'okpuru usoro iwu akwadoro, nke gụnyere ịnwale tupu ịpụ, ịnwale mgbe ị bịarutere na nkwekọrịta iji kwụọ ụgwọ kwarantaini.
Dabere na onye ndu Grenadian, Gọọmenti họpụtara Covid-19 A na-atụ anya ka kọmitii na-emechi ọrụ ya na ngwụcha ọnwa Julaị. Mgbe nke a gasiri, mkpebi nke gọọmentị maka okwu dịka usoro iwu, ụkpụrụ, ịkpọpụrụ iche na ule, ga-eduzi Kọmitii Na-ahụ Maka Ndụmọdụ Mba. A ga-ekwuputa ngwakọta nke ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, Mịnịstrị na-ahụ maka ahụike na Grenada Tourism Authority (GTA) azụọla ihe karịrị ndị na-esogharị njem nlegharị anya 1500 na usoro iwu ahụike na nchekwa ọhụụ maka ụlọ ọrụ ahụ; imepụta ụzọ ọhụụ eji azụ ahịa. Ndi mmadu abuo ga-aga n’ihu na ulo oru ọzụzụ a di mkpa.
Ka ọ dị ugbu a, Gọọmentị nke Grenada nọ na-enyekwu mgbatị ndị ọzọ na iwu COVID-19 iji kwe ka ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, na-agbaso ụkpụrụ nduzi guzobere maka ngalaba dị iche iche. Site na Tuesday June 30, ndị Grenadi ga-enwekwa nnwere onwe ịgbatị kwa ụbọchị, site na 5am ruo 11pm mgbe ha na-aga n'ihu na-ekpuchi mkpuchi ma na-eme mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọzọkwa, osimiri na-emeghe ọha na eze si 5 am-5pm. Grenada, Carriacou na Petite Martinique enweghị ikpe na-arụ ọrụ ugbu a nke COVID-19 (dịka nke June 18) yana ikpe 23 zuru oke.
GTA na mwepụta nke mkpọsa njem nlegharị anya nke ụlọ ọhụrụ akpọrọ Paradise na Home na Tọzdee June 25, 2020 na-agba ndị obodo ume ịnụ ụtọ onyinye pụrụ iche nke ngalaba ụlọ na-esonye wee nye aka na ngalaba ahụ nwalere usoro nlekọta ahụike na nchekwa ọhụrụ ya.